Tekinoroji yakabata sei Ecommerce panguva ya2016 | ECommerce nhau
Susana Maria Urbano Mateos | | ECommerce kudzidziswa, Zvidzidzo uye zviwanikwa
El simba rekutenga remutengi wepamhepo zvirokwazvo yakura uye mhedzisiro yacho inoshamisa. Asi pane zviripo chaizvo zvakawanda kune e-commerce pane kungotengesa. Iyo kukanganisa kwetekinoroji pane ecommerce Munguva ya2016 zvaita kuti zvikwanise kushanduka munzvimbo dzakasiyana uye nekuwedzera mashandiro uye masevhisi.
1 Global mapuratifomu mapuratifomu
2 Yese yevatengi ruzivo
3 Nhamba dzebhizimisi itsva
5 Iyo mobile platform
Global mapuratifomu mapuratifomu
Technology zvakakosha kubvumira makambani kuti awedzere mashandiro avo mumisika mitsva. Saa modhi inyaya yakakurumbira yekuwedzera nguva yekutengesa uye kudzikisa njodzi dzekuendesa. Makambani mazhinji ari kupa muchinjikwa-chiteshi SaaS zvipiriso kusangana nezvinobuda mumusika zvido.
Yese yevatengi ruzivo
ari mapuratifomu ekutengesa tekinoroji inopa kwakakosha kubatana mukati mehupenyu hwevatengi. Izvi zvinosanganisira kushambadzira, kutengesa, kushandira vatengi, uye kuchengetedza kuburikidza nzira dzepamhepo uye dzepamhepo. Ecommerce mabhizinesi izvozvi anopa zvinoenderana uye isina musono ruzivo kune vatengi vavo.
ari Ecommerce tekinoroji mapuratifomu ivo vanowanzo dzidzwa kusimudzira mhando nyowani dzebhizinesi uye nzira dzekutengesa dzekambani. Izvi zvakagadzira mapuratifomu akavhurika evanoshanda navo ecosystem yekubatana, misika, uye zvemabhizimusi ekutengeserana.
El Cloud Computing Izvo zvakakanganisawo ecommerce maererano nemutengo wakaderera wevaridzi uye kuwedzera kukura. Izvi zvakatendera e-commerce makambani kushanduka uye kupindura kumikana nehukuru hukuru.
Iyo mobile platform
Kune akawanda mabhizinesi, kunyanya chikamu chekutengesa, lSmartphones parizvino iri gedhi rechiratidzo. Iyo mobile platform senge chiteshi yakura nekukurumidza mumakore achangopfuura, nekutenga pamhepo kubva kune nhare inopfuura kutenga kubva paPC. Nharembozha iri kunyanya kukosha mukushambadzira pre uye post kushanya nekuwedzera kwekutsvaga kwemifananidzo, nzvimbo, nharembozha uye nenzwi-rakavakirwa ekutsvaga mabasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Zvidzidzo uye zviwanikwa » Matekinoroji akanganisa sei Ecommerce panguva ya2016